Siyaasiyiinta Galmudug oo ku kala qeybsamay qaabka loo wajahayo Ahlu Sunna | KEYDMEDIA ENGLISH
Siyaasiyiinta Galmudug oo ku kala qeybsamay qaabka loo wajahayo Ahlu Sunna
Qoor-Qoor ayaa la sheegay inuu ku mashquulsan yahay labo qorsho oo mid uu ku dhaqaaqi doono hadii kan kale fashilmay.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Galmudug waxay wajahaysaa xaalad jahwareer iyo hubanti la'aan ah kadib markii ay siyaasiyiinta kasoo jeeda degaanka ay si weyn ugu kala qeybsameen sida loo wajahayo ururka Ahlu Sunna, ee isku dayaya inuu talada kala wareego Qoor-Qoor.
Xildhibaanno iyo Mas'uuliyiin kala duwan oo ka hadlay Muqdisho ayaa isku maandhaafsan qaabka lagu xalin karo tabashadda Ahlu Sunna, oo si lama filaan ah awoodeedii dib ugu soo ifbaxday mudo maalmo gudahooda ah, islamarkaana la wareegtay Guriceel iyo degaanno ku dhaw Dhuusamareeb.
Waxaa fekerkaas oo kale qaba Xasan Cali Khayre oo xiligii uu ahaa Ra'iisul Wasaaraha waqti badan ku bixiyay dib u heshiisiinta Galmudug, isagoo si cad u shaaciyay inuu kasoo horjeedo duulaanka Ahlu Sunna, wuxuuna ku baaqey in si wadajir ah looga hortago.
"Waxaa nasiib darro ah oo aan la aqbali karin in reer Galmudug markii mudo dheer kadib dareemeen dowladnimo iyo horey u socod ay Maanta kooxo hubeysan ay qabsadaan degaanno nabad ah, islamarkaana ay geliyaan bulshadda colaad iyo barakac, lana hor-istaago horumarkii socday," ayuu yiri Khayre.